RentaCar Club အဝန်းလမ်းညွှန်ချက်များ
ဒီရိုးရှင်းတဲ့လမ်းညွှန်ချက်များသည်အောက်ပါကဒီအသိုင်းအဝိုင်းငါတို့ရှိသမျှအဘို့ပိုကောင်းတဲ့နေရာအရပ်လုပ်ကူညီပေးပါမည်။ သငျသညျမြားကိုလညျး RentaCar Club ရဲ့မူဝါဒများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & အခြေအနေများနှင့်အတူလိုက်နာနိုင်အောင်သူတို့ကိုမှတဆင့်ဖတ်ပါရန်သေချာစေပါဖို့လိုတယ်ဆိုတာသတိရပါ။
ဒါဟာကောင်းတဲ့ဖြစ်ကောင်းတဲ့င်: အနည်းငယ်ကြင်နာမှုရှည်လျားသောလမ်းဒီတော့နှင့်သင်၏ interaction ကအတွက်, ရိုးသားတိကျမှုနှင့်ယဉ်ကျေးဖြစ် သွား. , အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းနှစ်ဦးစလုံးအသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနိုင်ပါတယ်သတိရပါ။
ဂရုစိုကျမျှဝေခြင်းသည်: သင်ကုသခံရဖို့လိုတဲ့လမ်းကလူမှာရပ်တန့်ပါဘူးအခြားသူများကိုကုသခြင်း - ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာကားများသက်ဆိုင်သည်။ Xxxxxxxxxx အဆိုပါပါတီများကိုဆက်သွယ်နှင့် tools တွေကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်အဆုံး၌ကောင်းတစ်ဦးအတွေ့အကြုံအတွက်စေသည်ရပ်ရွာပါပဲ။ ပိုင်ရှင်လာမယ့်သငျသညျမှနျခရီးသည်ရဲ့ထိုင်ခုံ၌ထိုင်နေစဉ်လျှင်သည်အတိုင်းကားကိုမောင်း။
အခြိနျတိကခြွအကောင်းဆုံးမူဝါဒဖြစ်: အချိန်ပေါ် Be - အခြားပါတီသင်တို့အပေါ်မှာရေတွက်နေပါသည်! သငျသညျအနှောင်းပိုင်း running သို့မဟုတ်အခြားလူတစ်ဦးကနေတချို့နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်နေလျှင်, သူတို့နှင့်အတူနှင့် RentaCar Club မှရိုးသားဖို့အမြဲအကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဆက်သွယ်ရေးသော့ချက်ဖြစ်ပါသည်: တစ်ဦးကအသိုင်းအဝိုင်းဆက်သွယ်ရေးပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အားလုံးအဖွဲ့ဝင်များက up to date ဖြစ်နေသူတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်စောင့်ရှောက်သင့်ပါတယ်။ ပိုင်ရှင် / ငှားရမ်းသို့မဟုတ် RentaCar Club သင်ရောက်ရှိရန်ကြိုးစားလျှင်တစ်ဦးငှားရမ်းစဉ်အတွင်း, တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့ကွိုးစားပါ။
ဖန်အမြဲထက်ဝက်အပြည့်အဝဖြစ်ပါသည်: တစ်အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ခြင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအခြားလူများအမြဲတမ်းအငှားအကြောင်းကိုသဘောတူညီချက်မှမလာစေခြင်းငှါလက်ခံပါဝငျသညျ။ သင်သည်အခြားအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ဦးသဘောတူညီချက်မှမလာကြဘူးလျှင်ပင်အကောင်းမြင်နေပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပျော်စရာရှိသည်ဖို့သတိရ! သင်လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာလျှင် peer-to-peer ကားတစ်စီးငှားရမ်းတဲ့အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သစ်လူတွေကိုတွေ့ဆုံလမ်းတစ်လျှောက်ပိုက်ဆံချွေတာသို့မဟုတ်ဝင်ငွေနှင့်လမ်းမပေါ်တွင်ကားများလျှော့ချရန်ကူညီပေးနေအပေါငျးတို့သ RentaCar Club အတွေ့အကြုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။